ACDSee Pro bilaash wakhti go'an | Wararka IPhone
ACDSee Pro bilaash wakhti xadidan
Markii iigu dambaysay ee aan daabaco maqaal ku saabsan codsi bilaash lagu soo dejisan karo, ayaa ku soo beegmay xilligii aan daabacayay (barnaamij ayuu ahaa) intaas kadib bilaash laguma helin. Inbadan waxay ahaayeen waxaad igu dhaleeceysay, adoo ku doodaya in waxa kaliya ee aan doonayay ay aheyd inaan kasbado booqashooyin, wax aan macquul aheyn oo kahadlaya arji yar oo layaqaan iyo sidoo kale inaan ku helno bedello kale App Store. Dhammaan kuwa had iyo jeer igu mahadiya inaan ku wargaliyo iyaga noocyadan dalabyada ah, maanta waxaan idinkula socodsiinayaa in barnaamijka wanaagsan ee ACDSee Pro, KU-MEEL GAAR AH waxaa laga heli karaa soo degsasho bilaash ah. Aan aragno in tani ay u cadahay qof walba.
Qiimaha caadiga ah ee codsigan waa 6,99 euro, laakiin WAQTI XADIDAN, waxaan kala soo bixi karnaa gebi ahaanba bilaash. Thanks to ACDSee Pro waan qaban karnaa, wax ka badali karnaa isla markaana wadaagi karnaa sawirro. Codsigan wuxuu isku daraa kamarad casri ah, tifaftire awood badan iyo codsi ka kooban halabuur oo ay ku dhan yihiin dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah inuu na siiyo natiijo aan caadi ahayn.
1 Noocyada Kaamirada
2 Astaamaha Tifatiraha
Xakamaynta Tilmaamaha. Xakamaynta saxda ah ee soo-gaadhista, diiradda, xawaaraha waxqabadka iyo dheelitirka cad.
Ahmiyadda koowaad. Si otomaatig ah u hagaaji ISO si waafaqsan xawaaraha xirka. Digniinta waqtiga-dhabta ah haddii ay dhacdo soo-gaadhis saa'id ah ama soo-bandhig la'aan.
Qaabka selfie. Tus dhinacaaga ugufiican ee maqaarka kufiirinta iyo laydhka, iftiinka hore marka ay mugdi tahay, iyo badhan weyn si aad ufududayso.
Shaandhooyinka waqtiga dhabta ah. 24 saameyn oo ay ka mid yihiin: mono, tonal, noir, libdho, chrome, geedi socod, wareejin, sawir qaadis iyo inbadan ...
Isku hagaajinta waqtiga dhabta ah. Iftiin, isbarbar dhiga, heerkulka midabka, firfircoonida, cad, maqaarka midabkiisa, ciilkiisa.
HDR Fusion. Si otomatig ah isugu dar saddex sawir oo lagu qaaday soo-gaadhis ka duwan sidii loo abuuri lahaa hal sawir oo leh kala-firidh ballaaran oo firfircoon. Adigu gacanta ku hagaaji dhalaalka iyo kala-soocida.
Isku dhafka Flash. Adeegso flash stagger si aad isugu darto laba sawir (mid aan bilaa iftiin ahayn, midna flash). Iska yaree xoojinta iftiinka iftiinka dabiiciga ah.
Saamaynta gaadhista. Qaado saddex sawir oo isku xigxiga oo leh bandhigyo kala duwan.
Habka fiidiyowga. Ku soo qaado daqiiqadahaas gaarka ah fiidiyowga oo u isticmaal miirayaasha iyo hagaajinta waqtiga dhabta ah.
Hababka Flash. Dami, daaran, baabuur, toosh, iyo toosh iyo toosh isku dhafan. Waxqabadka cajiibka ah ee hore ayaa adeegsada shaashadda LCD si uu u iftiimiyo.
Taabo diiradda iyo soo-gaadhista. Taabo si aad u xulato dhibcaha diiradda iyo soo-gaadhista. Si loo xakameeyo xakamaynta, si madax-bannaan u dooro dhibcaha diiradda iyo soo-gaadhista.
Qufulka autofocus, gaadhista otomaatiga ah iyo dheelitirka cad
U deji xuduudaha sida ay baahidaadu tahay, ka dibna quful diiradda otomaatiga, soo-gaadhista otomaatiga, iyo isu-dheelitirka cad ee otomaatiga ah.
Kala jiidashada codka
Ka saar buuqa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » ACDSee Pro bilaash wakhti xadidan
Ku jawaab Nirvana
Ku jawaab Borjall
Ku jawaab Cvb
Mahadsanid!!! Waxaad na dhaafin doontaa qaar ka mid ah komishankaaga !!! Waa kaftan !!! Dhab ahaan, idinka ragga ah shaqo weyn ayey u qabtaan dhinac walba! Sii wad !!
Intee in le’eg oo xanaaq ku meelgaar ah ah ... Nin fudud, xoogaa nasteexo Trolls waa meel walba. Waan ognahay inay tahay wax kadis ah oo ay dhici karto ama laga yaabo inaan la heli karin markaan aragno. Mahadsanid! (Tani waa haddii la heli karo).
Waa la mahadiyey. Waa codsi aad u xiiso badan, oo leh xulashooyin badan oo tafatir ah iyo kamarad si buuxda u dhameystiran. Mararka qaarkood xulashooyinka qaarkood barnaamijka ayaa lagu xakameynayaa beta-kii ugu dambeeyay ee macruufka 10. Waxaan rajeynayaa nooca ugu dambeeya ama cusbooneysiinta barnaamijka ma dhicin. Ficil ahaan waa 7 euro oo keyd ah, taas oo aan haba yaraatee xumaan.
Aad baad u mahadsantahay, raaxo.
Fernando saytuun dijo
Waxaan u maleynayaa qoraalladaan inay yihiin saaxiib weyn mahadsanid, salaan ka timid El Salvador
Jawaab Fernando Oliva
Haddii ay lacag la’aan tahay, aad baad ugu mahadsan tahay faahfaahinta.
Waad salaaman tahay, barnaamijki waan rakibay mana garanayo waxa aan sameeyay faylkuna waxay la soo baxayaan calaamadda Xaaraanta mana garanayo sida loogu laabto si markaa disk disk-ka iyo faylkuba aan loo hubin. Mahadsanid
Toddobaadka soo socda Apple waxay bilaabi doontaa nadiifinta App Store
Apple waxay isu diyaarineysaa inay furto Bakhaarkii ugu horreeyay ee Apple ee Mexico iyo Colonia